Boston:-Hay’ada Haro waxaan ogeysiinaynaa Walaalaha Soomaaliyeed gaar ahaan Waqooyiga Maraykanka inay Zakaatul Fitrigooda kusoo dhakhsadaan si xili ku haboon dadkaas loo gaarsiiyo, Sidoo kale Imaamka Seattle Sh. Axmed Nuur ayaa arinkaas Cajal Vedio ah ku faah faahiyey, Axkaamta Zakada iyo in Haro loo dhiibo walaalaha u baahana xili ku haboon laghaarsiiyo.
Arintaas oo daba socotay Safar ay Xamar ku aadeen Sh. C/raxmaan Sh. Cumar iyo Xasan Dhooye oo ah madaxa fulinta Hay’ada Haro, safarkaas oo Madaxa Fulinta ee Hay’ada warbixin muuqaal ah kasoo diyaariyey horayna warbaahinta looga siidaayey.
Sidii horay warbaahinta loogu faafiyey, jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Boston oo uu hogaaminayo Boston Islamic Center ayaa soo qaban qaabiyey shir dhaqaale loogu aruurinayo barakacayaasha Soomaaliya. Shirkaasna wuxuu ka dhacay goobta loogu tala galay shirarka ee Hiebernian Hall
Shirkaas waxaa lagu casumay Madaxa Hay’ada HARO Hassan Dhooye oo dhawaan wadankii kasoo noqday gaar ahaan gobolka banaadir. Shirka ayaa aad waxaa uga soo qayb galay dadwaynaha reer Boston rag iyo dumarba, halka qaar soo gaariwaayeyna ay soo dhiibeen tabarucaadkoodii.
Halkan ka daawo Masawirada Jaaliyada Boston oo ku deegay aduun dhan $15,000
Halkan ka daawo hay,da HARO oo gargaar ka qeybineysa Xerada naafada ee Amaana
Halkan ka Daawo HARO oo afur u qeybineysa xerada Indhoolayaasha
Halkan ka daawo HARO oo afur ka qeybineysa xerada QodQod iyo Ashraaf